‘मधेसका विषयमा प्राज्ञिक चिन्तन फितलो छ’ | Mechikali Daily
Posted By: मेचीकाली डेस्कon: ४ चैत्र २०७५, सोमबार ०१:४७
काठमाडौं । झण्डै आधा जनसंख्या रहेको मधेस पर्याप्त संभावना भएर पनि माथी उठ्न सकेको छैन । कृषिमा व्यवसायिकरण, हुलाकी राजमार्ग, सेनामा मधेसी युवाको सहभागिता जस्ता विषयहरु चर्चामा त ल्याइयो तर व्यवहारमा हुन सकेन् । मधेसले चाहेको विकास र समृद्धि अहिलेसम्म पनि नभएको आम मधेशवासीको गुनासो छ ।
विकासका सुचांकमा मधेस किन कमजोर भयो ? यसको एउटै उत्तर भेटिन्छ सरकारले सम्भाव राख्न नसक्दा सदियौ देखिको बिभेद अहिले पनि कायम छ । संविधानले देशबासी सबैलाई समान अधिकार दिएको छ , तर अधिकार बाँडफाँडमा सरकारले बिभेद गरेको आम बुझाई छ ।
मधेसको हितमा काम गर्ने नारा दशकौं अघि देखी चल्दै आएको हो । राजा महेन्द्रका प्रिय पात्र बेदानन्द झा देखि अहिलेसम्म आइपुग्दा दर्जनौं नेताले मधेसको हितमा काम गर्न कसम खाए र राजनीति गर्दै उच्च पदमा पुगे तर मधेसको मुहार फेरिएन ।
वि.स.२०१५ सालबाट मधेसमा राजनीतिक गतिविधीले तिब्रता पाएको हो । जनताले आश्वासन पाए तर त्यहाँभित्र भएको असमानताको खाड्ल झनै बढ्यो जसको फलस्वरुप भूमिगत समूहहरुका गतिविधीहरु मौलाए । द्वन्द्वले हिंसात्मक रुप लिंदै गयो । सयौंको संख्यामा युवाहरु मारिए ।
०६२ /६३ सम्म आइपुग्दा अबस्था झनै बिकराल बन्यो । दुई दर्जन भन्दा बढी सशस्त्र समूहहरुले मधेसको स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदै संघर्ष गरे । नेपाल सरकारले डेढ दर्जन सशस्त्र समुहसँग शान्ति मन्त्रालय मार्फत सम्झौता पनि गर्‍यो । स्मरण रहोस स्वतन्त्र मधेसका नाममा सिके राउतसंग गरिएको यो ११ बुदे सम्झौता १९ औं हो ।
सिके राउतसँग गरिएको सम्झौतापछि तातेको नेपालको राजनीतिमा फागुन २४ ले फरक तरंग पैदा गरेको छ । सरकारले स्वतन्त्र मधेसको माग गर्दै आएका ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका’ संयोजक सिके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गरेको छ । सहमति भए लगतै सिके राउतका कार्यकर्ताले विखण्डनको नारा लगाएपछि थप आशंकाहरु बढेका छन । दुबै पक्षले आफ्ना अनुकुल सहमतिका बुँदा ब्याख्या गर्दै आएका छन । स्वयम प्रधानमन्त्री ओलीेले ठूलो सफलताका रुपमा सम्झौतालाई अर्थाया्इ रहेका छन भने उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरुले विना कुनै आन्तरिक छलफल र सहमतिका विवरण तयार पारेको, विखण्डनकारी संगठनलाई मान्यता दिएको लगायत सम्झौताको दोस्रो बुँदाले मधेशमा जनमतसंग्रह गर्ने प्रावधानलाई स्वीकारेको आदी आलोचनाहरु गर्न थालेका छन ।
सिके संगको सहमतिपछि सरकार बाहिरबाट विरोधका स्वरहरु घन्किनु त स्वाभाविक नै हो । सम्झौता पश्चात मुलुकमा थप संकट बल्झन सक्ने कतिपय सरोकारवालाहरुको बुझाइ छ । राउतसंगको सहमतिले मधेसमा हुन सक्ने अनिष्ट हालका निम्ती टरेको हो ? यदी राउत मूलधारको राजनीतिमा समायोजित भए भने पनि अर्को सीकेको जन्म हुनसक्ला कि नसक्ला ? भन्ने प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । यसै सन्दर्भमा मधेस मामिला बारे सूक्ष्म अध्यन गरिरहेका तथा विचार ब्यक्त गर्दै आइरहेका डा.राजेश अहिराजले हालको राजनीतिक जोडघटाउलाई भिन्न रुपमा ब्याख्या गर्दै आइरहेका छन् । मधेस मामिलाका जानकार अहिराजले फ्रेसन्यूज नेपालँंग मधेसका मुद्दा, सिके राउत र सरकार बीच भएको ११ बुँदे सम्झौताका विषयमा यस्तो टिप्पणी गरेका छन् ।
अरु मधेसी नेताहरु र सिके राउतमा फरक
अन्य मधेसबादी नेताहरुले राज्य सत्तासंग आन्दोलनका मागहरु राखेर संझौता गरे राउतले चाहीं आफ्नो समूहको माग प्रस्तुत गरे र सम्झौता गरे । यीनले आफ्नो समूहका पक्षमा कुरा गरे ।
फेरी अर्को सिके राउत जन्मन सक्छ
यो त पक्का जन्मिन्छ । समस्या भनेको व्यक्तिमा होइन राज्य संचालनमा छ । राज्यको व्यवहारमा समस्या छ । जबसम्म यो मुलुकमा समानन्तर, सद्भाव, हृदयता हुँदैन तबसम्म विद्रोहका स्वरहरु जन्मिरहन्छन । अहिले मधेस विद्रोह गर्न सक्षम छ, मधेसले विद्रोह गर्छ । कुनैबेला जनजातिले गर्ला, महिलाले गर्लान । यो विद्रोहको स्वर नेपालमा उठिरहन्छ जबसम्म राज्यले बिभेद गर्छ र विधिको शासन अनुसार चल्दैन तव बिद्रोह हुन्छ । सिके राउत भनेको पहिलो होइन् २०१५ सालमा नै मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर दल खुलेको थियो । क्रान्तीकारी दल भनेर नै २०१५ सालमा खुलेको थियो । नेपालमा मधेसी माथी शासन सत्ताले विभेद गर्दै आएको छ । समस्या भनेको व्यक्तिको नियती हो ।
हाम्रो संविधानले सबैलाई समान हक दिएको छ । संविधानमा कोही कसैलाई विभेद गर्नुहुन्न, सबैलाई समान हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । अधिकारबाट कसैलाई पाखा लगाउन हुँदैन भन्ने छ तर वितरण प्रणालीमा हेरौं कति भिन्नता छ । यस अघिका सबै संविधानमा पनि यि कुराहरु थिए तर व्यवहारमा थिएन । अहिले पनि अवस्था उस्तै नै छ ।
महिलालाई यति प्रतिशत अधिकार दिनुपर्छ, भन्ने लेखेर ल्याउने संविधान पारित गरेपछि तिनकै महिलाको सहभागिता छैन् । यो सबै राज्य संचालनको समस्या हो । समस्या मधेसमा होइन समस्या केन्द्रमा छ । जबसम्म विभेदको अनुभूति भइरहन्छ तबसम्म स्वर सानो र ठूलो होला पात्र फरक होलान आवाज उठिरहन्छ ।
राउतको मूलधारको राजनीति
व्यक्तिको आफ्ना आफ्नै सोच हुन सक्छ । सिके राउत मुलधारमा गए पनि राज्यले समस्या समाधान गरेन । नेताको व्यवस्थापन गर्‍यो । गर्नुपर्ने मुद्दाको व्यवस्थापन हो । राज्यले भन्नु पर्‍यो विभेद गरेका छैनौं, तराईलाई मात्र होइन दुर दराजको अवस्था पनि उस्तै छ । जुम्लालाई हेर्न सकेको छैन । जनकपुर, पाटनलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन, किर्तिपुरलाई पानी दिन सकेको छैन् । कसैलाई केही गर्न नसकेको अवस्थामा तिमीले आफ्नो कुरा राखेको जाहेज हो तर मैले कसैलाई गरेको छैन् भन्न सक्नुपर्‍यो सरकारले । कि त समस्याहरुको रिफरेन्स गरिदिनुपर्‍यो । अब देखि यी ठाउँमा यसरी जान्छौं भनेर कन्भिन्स पनि नगरिदिने हो भने यो शिलशिला चलिरहन्छ । आज सिके अगाडि आयो राज्यले त्यसलाई सहमति गर्छ, अर्को कुनै यादव आउला, पर्सी कुनै झा आउंला जबसम्म सरकारले मधेसी जनतालाई कन्भिन्स गर्दैन द्वन्द्व रहिरहन सक्छ ।
तराई छुट्टिदैमा समस्या समधान हुन्छ
तराई छुट्यो भनेपनि समस्याको समाधान हुँदैन् । छुट्टिनाले कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । तर छुट्टिनेको मुद्दा उठाएर त्यो बीचमा जनताको जनजीवन अस्तव्यस्त हुने अवस्ता राज्यले दिनुहुँदैन् । शासकहरुको नियत प्रष्ट हुनुपर्छ । मधेशमा बस्ने जो कोहीले यो मेरो देश हो भन्ने अनुभूत गराउन नसकेसम्म समस्याहरु बल्झिरहने देखिन्छ । कतै संगठित रुपमा त कतै असंगठित रुपमा । सम्भावको कमी हिजो पनि थियो र आज पनि कायम छ ।
मुलधारको राजनीतिमा मधेसको मुद्दा
नेपालमा मुलत दुईवटा संकाय छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादी यीनका पार्टीलाई एकातिर राखौं, त्यो तीनवटा पार्टीले आफ्नो केन्द्रिय संरचनामा मधेसले ३० प्रतिशत उठाउँदैछ । देशभर संगठन निर्माण गरे पनि उनको कार्यशैली, प्रतिबद्धता, परिमाण, कार्य संचालन क्षेत्रहरु उपल्वधीहरु सबै एउटा मात्र समुदायले लिन्छ । ठिक त्यसैगरी राजपा लगायत मधेसका नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने त्यसले पनि एउटै समुदायको बचस्व पार्टीमा राख्छ ।
राष्ट्रिय संरचना भएको तर नसलीय दल भएका कांग्रेस, एमाले माओवादीलाई हामीले राष्ट्रिय पार्टी भन्दै आयौं । क्षेत्रीय संरचना भएका र एउटै नस्लका लागि काम गर्ने दल क्षेत्रीय दल भन्दै छौं । एउटा मात्र जिल्लामा उपस्थिति भएको चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे भएको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भनेर समर्थन गर्छौं ।
२७ वटा जिल्लामा संगठन रहेको राजपालाई हामीले क्षेत्रीय पार्टी भनेर संबोधन गर्छौं । पक्षीयता अथवा पक्षीय प्राज्ञिक चिन्तन हामीमा अहिले पनि छ । अब यसमा समस्या के छ भने यदि आफ्नै कुनै समुदायलाई नराखेर एउटा नेपाली भएर हेर्ने हो भने मधेसको राजनीतिमा यस्तो अवस्था आउनुमा सबै भन्दा ठूलो लगानी नेपाली कांग्रेसको छ । २००८ सालमा नै जब मधेसका नेताहरुले नेपालका संरचनामा मधेसीले ठाउं पाएनन्, भाषामा मधेसीको पहँुच भएन् भनेर नेपाली कांग्रेससंग अपिल गरे । त्यो बेला नेपाली कांगे्रसले सुधारमा चासो दिएन । यी नेताहरुले यस कारणले गलत गर्दैछन् भनेर कारवाही पनि गरेन । तराई कांग्रेस खुल्दा जुन माग लिएर अघी बढेको थियो आज पनि राजपा लगायतका नेताले तिनै मागहरु लिएर आन्दोलित छन् ।
राज्यले २०५० सालमा सदभावना पार्टीसंग अब मधेससंग विभेद हुने छैन् भन्ने सहमति गर्‍यो । त्यति खेर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । राज्यले सहमति गरिसकेपछि र लागू नगरेपछि त्यही कुरा लिएर आज मधेस पून आन्दोलित छ । दलहरुले पनि मधेसलाई उपेक्षा गर्न, राज्यले पनि गर्न नसक्ने भएपछि बिभेदका मुद्दा थिग्रंदै जाने भए । एउटा समुदायसंग ३१ वटा सम्झौता भए पनि त्यसले न्याय अनुभूति गर्न सकेको छैन् भने समुदायमा आक्रोश बढेर जान्छ । अब राज्यले सम्झौता गर्दै जाने, दलले सम्झौता गर्दै जाने, जबजब मधेसले हामीमाथी अन्याय भयो भनेर सवाल उठाउँछ, अनि सरकारले विखण्डनकारी भन्छ ।
जनमतसंग्रह कति सम्भव
यसलाई यस अर्थमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । एउटा नेपालको संविधानलाई स्वीकार गरे भनिसकेपछि संविधानको कुन–कुन पानालाई गर्‍यो, कुन–कुनलाई गरेन भन्ने ठाउँ छैन् । संविधानलाई स्वीकार गरियो, संविधानलाई अखण्डतालाई, नेपालको सर्वभौमसत्तालाई एकै नम्बरमा सबै स्वीकार गरिन्छ । १ नभएर २ नम्बरको कुरा गर्ने हो भन्ने त्यसले थप शंका पैदा गर्छ ।
कुनै पनि विद्रोही शक्तिले राज्यसंग सहमति गर्दा अलिकति अन्तर राख्छ । किनभने कुनै बिद्रोहीसंग हतियार सहितको कार्यकर्ता हुन्छन् । यदि उनले अलिकति पनि ठाउँ नराखी सहमति गर्‍यो भने भोली उनकै कार्यकर्ताले नेतृत्वलाई छोड्दैनन् । नेतृत्वलाई जोखिम छ ।
सिके राउतलाई कति अप्ठ्यारो
थोरै लचकताको प्रावधान भयो भने नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई आफ्नै भाषाका कन्भिनियन्स गरेर यो होइन यो हो भनेर विस्तारै मत्थर गर्न सक्छ । हिजोको दिनमा माओवादी र सरकार बीच सहमति भयो । सहमति भए लगतै समस्या समाधान भएको होइन् । त्यही सवाल सञ्चार माध्यमले माओवादीलाई किन गर्दैनन् ? उसलाई विस्तारै विस्तारै सल्ट्याउन मौका दिने सिके राउतको सवालमा भने तत्कालै नतिजा खोजेर भएन । उनीहरुलाई पनि त समय लाग्ला । सिके राउतले आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि कन्भिन्स गरेर मूलधारमा ल्याउन केही समय लाग्ला । प्रक्रियागत हिसावले मूलधारमा आउन त कार्यकर्तालाई पनि मनाउनु पर्ला ।
हिजो सहमति गरेको आज नै फिर्ता आउ भनेर हुकुमी शैलीले राजनीति हुँदैन । समय यिनलाई पनि दिनुपर्छ । अहिले कस्तो छ भने विखण्डनको राजनीति नहोस् भनेर उसका सबै कार्यकर्तालाई मुल धारमा ल्याएर जानु छ । सिकेलाई मात्र ल्याएर प्रयाप्त हुँदैन । अन्यलाई पनि समाबेश गर्नु पर्दछ त्यसका निमित्त केही समय लाग्छ । त्यति त कुर्नु पनि पर्छ ।
व्यक्ति हत्या, हिंसा बढेको छ । विचारको प्रभाव गर्नका लागि सिके नेपालमा बस्नु जरुरी थिएन् । अमेरिका, जापानमा बसेर पनि सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेटबाट सिडी ल्याएर आफ्नो विचारको प्रवाह गर्न सक्थे । त्यो गर्दा खेरी नेपालको भूमी छोडेर मान्छेले के भन्छ भने सिकेको सोच खराब हो भन्छ । अहिलेसम्म जति पनि मुद्दा पर्‍यो सिके राउत माथि उनले कुनै पनि मुद्दामा तारिख छोडेनन् । अदालतमा गएर तारिख लिनु, मुद्दा लड्नु, मुद्दा जित्नु, मुद्दामा कहिलेकाही हार्नु, कहिलेकाही जरिवाना तिर्नु, त्यो नियम को कुरा मान्नु हो ।
सबै मधेसी राउतको समर्थनमा !
यो स्वाभाविक हो युवाको संख्या धेरै छ । मधेसमा अहिले पनि अधिकांश नागरिक मधेस छुट्टै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनन् । मेरो भनाइ के हो भने सिके राउत र सरकार बीचको सम्झौता मधेसको मुद्दाको सवालमा एउटा पनि बुँदा राखिएनन् । आफ्नो संगठनको विषयको मात्र कुरा गरे । अर्थात मधेसलाई हुने गरी सहमत भएन । उनको संगठनलाई मात्र भयो । नेताको व्यवस्थापन भयो मुद्दाको व्यवस्थापन भएन ।
मलाई सिकेको चिन्ता भन्दा पनि मधेसमा जुन सदियौंदेखि उठ्दै आएका सबालहरु छन त्यसको चिन्ता छ । मधेशमा जुन किसिमको बिभेद छ त्यसले आम जनतामा आक्रोश फैलाएको छ । मधेसमा यो भन्दा ठूलो खालको विद्रोह हुन्छ की भन्ने सम्भावना छ जस्तो लाग्छ । किनभने केही दिनपछि विदेशमा रहेका मधेसका युवाहरु नेपाल फर्किन्छन् । श्रमिकहरु फर्किन्छन् उनीहरुसंग पैसा हुन्छ र मधेसमा लगानी गर्न कुनै ठाउं छैन् ।
उ जुन ठाउँबाट फर्कदै छ त्यो पैसा लिएरर मात्र फर्केको हुँदैन् । उसले त्यहाँको चिल्लो बाटो, व्यवस्था हेरेको छ । तरकारी किन्दा एटिएम प्रयोग गरेको व्यवस्था हेरेको छ । उसले सानो चोट लाग्दा पनि अस्पतालको सेवा सुविधा हेरेको छ । जब ऊ त्यहाँबाट फर्किन्छ अनि त्यसबाट उसले मधेशमा त्यस्तो व्यवस्था खोज्छ नभएपछि राज्यले रंगभेद गर्‍यो विभेद गर्‍यो भनेर आक्रोश पोख्छ । सदरमुकाममा सेना छ, हाइवे र सदरमुकामको बीचमा सशस्त्र प्रहरीको क्याम्प छ । यति पातलो लम्बाई, चौडाई भएको मधेसमा चारवटा राज्यको सुरक्षा निकाय छ । त्यो पनि नपाएपछि विद्रोहको बाटो अपनाउंदा त्यो राज्यले धान्न सक्दैन् । त्यसको पहिलो प्रहारमा नेताहरु पर्छन ।